यो कलाकार सयौं सानो को चित्र द्वारा प्रेरित गरीएको छ | क्रिएटिव अनलाइन
धेरै कलिलो उमेरमा कल्पना र रचनात्मकता कुनै पनि जवान बच्चालाई ओभरफ्लो गर्दछ। उनीहरूसँग त्यस्तो प्राविधिक क्षमता छैन कि तिनीहरू थोरै पाको उमेर भए पनि निश्चित रूपमा खजानामा छन्, तर ती विचारहरू जुन उनीहरूको सानो टाउकोबाट उत्पन्न हुन्छन् धेरै आश्चर्यजनक छन्। यो कलाकारको प्रस्ताव हो जसले २ बर्षको अवधिमा सयौं साना व्यक्तिहरूको रेखाचित्रमा 300०० राक्षसहरू खिचे।
आरोन जेन्ज भएको छ मिशिगनका युवा बच्चाहरूलाई आमन्त्रित गर्दै संयुक्त राज्यमा, उनीहरूलाई राक्षस डिजाइनहरू पठाउन। उहाँसँग १ 17.000,००० भन्दा बढी रेखाचित्रहरू छन्, जसमध्ये उनले 300०० भन्दा बढी चित्र कोर्दै आएका छन्। जसमध्ये केही तपाईं तल देख्न सक्नुहुन्छ र धेरै अन्य वेबसाइटबाट देख्न सक्नुहुन्छ जुन उहाँ यस कलात्मक परियोजनाको लागि सक्रिय हुनुहुन्छ।
जेन्जले यी दुई बर्षमा आउने हरेक चित्रलाई ध्यानपूर्वक हेर्न केही समय लिएका छन् र केहि चयन गर्न र रेखाचित्र मा तपाइँको सबै प्रविधी राख्नुहोस् सानाको रचनात्मक दिमागको सेवामा।
र सत्य कि परिणाम धेरै उल्लेखनीय छ सबै किसिमको बमब्यास्टिक, हास्यास्पद, जिज्ञासु, मूल र धेरै राम्रा राक्षसहरू फेला पार्न। जेन्जले बनाएका चित्रहरू र colored्गीन पेन्सिलले कोरिएका थिए, ठीक त्यहि प्रविधिबाट जुन उनले प्रायः पुस्तकहरू चित्रण गर्न प्रयोग गर्दछन्।
रेखाचित्रहरूको संग्रह ग्रिड र्‍यापिड, मिशिगनमा आर्टप्रिज २०१ 2018 मा देख्न सकिन्छ। थोरै टाढा, तर यो १ days दिनको लागि उपलब्ध हुनेछ ताकि कोही पनि यसलाई अवलोकन गर्न सक्दछन् र यसरी सयौं बच्चाहरूको रचनात्मक विचारहरू र यस कलाकारको प्रतिभा दुवैको प्रशंसा गर्न सकिन्छ।
र तपाईं यहाँ पनि चित्रण गर्न को लागी अधिक रेखाचित्र पठाउन जारी राख्न सक्नुहुन्छ सानो कामको अर्को हुँदै अन्त दानव कला को लागी। तपाईले अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ artprize.org.
हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं धेरै विशेष उपकरण घरमा साना बच्चाहरु को लागी र तिनीहरू यसको साथ चित्र बनाउन सिक्छन्.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » यी 300०० भन्दा बढी राक्षसहरू सयौं साना व्यक्तिहरूको रेखाचित्रमा आधारित छन्